NextMapping | Ekekọrịta Ọdịnihu
Jason Campbell nke MindValley gbara Cheryl Cran ajụjụ ọnụ na 'ndu onwe ya' iji mepụta ọdịnihu.
Iji gee ntị n ’ọhụụ nke ajụjụ ọnụ a Ebe a.
Jason: Enwere m Cheryl Cran ebe a, nke, Oh my gosh, anyị ga-enwe ọgwụgwọ dị otú a na-ekwu maka ọdịnihu nke ọrụ yana na a ga-ekekọrịta ọdịnihu. Echere m na Onalytica ghọtara ya dị ka onye mbụ na-emetụta ihe. Mgbe a bịara n'ikwu okwu banyere isiokwu a, olee otú ọrụ ga-adị n'ọdịnihu? Ọ bụ onye ndu na-ekwu okwu na nzukọ dị iche iche gburugburu ụwa. Edeela akwụkwọ asatọ na nke itoolu anyị na-abịa na ihe anyị ga-ekwu maka ọtụtụ ugbu a bụ n'ezie ihe na-eme, kedụ mgbanwe ndị a anyị na-ahụ n'ebe ọrụ ugbu a? Kedu ihe ọdịnihu ga-adị na gịnị ka anyị nwere ike ime banyere ya iji nọgide na-arụpụta ọrụ nke ọma ma na-enwe mmetụta dị egwu. Cheryl, daalụ nke ukwuu maka ịnọ na ngosi na nnabata.
Jason: Achọrọ m ịnụ ihe bụ njem gị ịbanye na ngalaba a nke inyere ndị mmadụ aka ịgafe mgbanwe oleekwa otú i siri nwee ike ịnyagharịa na ngalaba ahụ ma nyere ụlọ ọrụ aka n'ezie ịghọta ihe ọ dị mkpa ime?
Cheryl: So my njem is a bit bit unorthodox in na m na-agaghị mahadum ma ọ bụ mahadum. Kedu nke na - ewu ugbu a!
Amalitere m ọrụ m ozugbo na ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma abanyekwara ụlọ akụ. Enwere m nnukwu ihe ịga nke ọma. A kuziri m ka m na-arụsi ọrụ ike, na-arụsi ọrụ ike ma e bulie m n'ọbụ onye isi mgbe m dị obere, afọ 23.
Stylezọ m pụrụ iche dị ka onye ndu bụ ịtọ ọhụụ ma gbaa ndị mmadụ ume ma mee ka ha nwee mgbanwe. Nke ahụ bụ ụdọ m site na mbido wee were nka ahụ ruo mgbe m hapụrụ ụlọ akụ wee gaa wee zoo ma gaa ahịa mkpuchi, buru nnukwu ogwe mkpuchi mkpuchi na-aga nke ọma, mere ọtụtụ ndị ọkachamara na-ekwu maka ndị mmepe na ndị na-azụ ahịa. na ndi ozo. Ya mere ikwu okwu okwu gi bu ihe m choro.
M dere akwụkwọ mbụ m, “Kwue Ihe Mean Na-ekwu - Pụtara Ihe I Kwuru”N’afọ 2001 na akwụkwọ ahụ gbasara etu anyị ga - esi wee nweta ọdịnihu na - edoghi anya yana nso nkwukọrịta dị anyị mkpa iji mee nke ahụ.
Na mgbe ahụ akwụkwọ asatọ gachara, esoro m na ụlọ ọrụ na-ahụ maka nyocha ihe karịrị afọ 20. Edere m akwụkwọ ahụ "NextMapping - Na-atụ anya, igatenyagharịa na Mepụta Ọdịnihu nke Ọrụ" afọ abụọ gara aga na tupu nke ahụ "The Art of Change Leadership- Mgbanwe Ọkwọ ụgbọala Na awa Na-agba Ọsọ". Ike m nke ịbụ ihe ngaghari iwe na mgbanwe ọgba aghara bụ ihe m nweela nyefee ndị ahịa anyị na-arụ ọrụ na atụmatụ a na-arụ ọrụ mana na otu anyị na ndị anyị na-azụ ma na-atụle.
Jason: Mgbanwe ọ na - eme ọsịsọ n’ọsọ ọsịsọ? Nkà na ụzụ ọ na-agbanwe ụzọ anyị si arụ ọrụ? Gini mere ngbanwe ji sie ike?
Cheryl: Ọfọn, echere m na ọ bụ njikọta nke ihe niile dị n'elu. Peter Diamandis, onye nchoputa nke mahadum singularity na-ekwu maka mgbanwe mgbanwe na oke mgbanwe nke mgbanwe. Nke ahụ bụ ihe anyị na-ebi ugbu a. Ya mere, anyị na-ekwu maka mgbanwe ruo ọtụtụ iri afọ, mana ruo puku abụọ puku mgbanwe a gbanwere. Iji maa atụ, ka anyị kwuo maka igwe ATM. Mgbanwe ahụ bụ mgbanwe dị mma nke mmadụ niile mere maka ya ngwa ngwa. Ma mgbe ị nwere puku abụọ na ugbu a ị nwere ọhụụ ọhụụ na-eme kwa ọnwa nke jikọtara na mgbanwe teknụzụ yana mgbanwe nke ọha. Uche ndi mmadu na-emeghe ka ihe di iche iche di iche iche. Societaly m na-ekwu na anyị na-ekwu okwu ugbu a n'ezoghị ọnụ banyere ihe ndị a na-agatụbeghị atụle afọ iri gara aga ma na-ele anya otu anyị ga - esi meziwanye ụwa site na mgbanwe. Mana ị kwuru eziokwu, mgbanwe akparamàgwà mmadụ bụ ihe kacha esiri ndị mmadụ ike ime. Anyị na-esi n'uche 'm gaa anyị' nke achọrọ iji mepụta ọdịnihu nke ga-ekekọrịta.
Teknụzụ dị mfe. Talk na-ekwu maka CRM na nyiwe, akụkụ ahụ dị mfe. Nwere ike ịsị, nke ọma, enwere ike idozi nsogbu a site na teknụzụ. Ọ bụ ndị mmadụ bụ nsogbu.
Anyị anaghị eleda mkpa ọ dị ime ka ndị mmadụ zụta n'ọdịnihu ka ọhụhụ mgbanwe, jikọọ mgbanwe ahụ na nzube nke ha na ijikọ mgbanwe ahụ na mmetụta ga-adị na ha. Onwe ya. M guzosiri ike na ike na ahuhu kwere na ọ gwụla ma anyị nwere a mgbanwe ochichi ndu na teknụzụ ọhụụ, anyị ga-aga n'ihu na-enweta ihe nkwụghachi n'aka ndị mmadụ n'ihi na anyị anaghị atụkwasị obi mgbanwe ahụ obi ọ gwụla ma anyị nwere ike ijikọ ya na ihe ọ pụtara ma eche m na nke ahụ bụ okporo ụzọ anyị nọ ugbu a.
Jason: Chaị. Ọ ga-amasị m ịmatakwu nke ahụ karịa n'ihi na amaara m nke ọma oge m gbalịrị ịkwanye teknụzụ teknụzụ n'ime ụlọ ọrụ na ahụla m ka mmadụ niile si megide m na ọtụtụ ihe ị na-ekwu maka mgbe ị kwuo okwu banyere ịtụ anya na ọdịnihu nke ọrụ bụ akụkụ a nke omume mmadụ. Kedu ihe ị chere gbasara echiche nke ihe a? Ọ dị m ka ọtụtụ oge ndị mmadụ bụ naanị, na onwe m, enwere m obi abụọ na mgbanwe ma ọ bụ teknụzụ ma ọ bụ ihe ọ bụla na-abịa ga-eme ka ndụ m dị mfe. Nke a ọ bụ n'ezie ebe ọdịiche ahụ na-eme?
Cheryl: N'akwụkwọ m, “Nkà nke ndu ochichi”, M na-ekwu banyere mgbanwe mgbanwe na otu anyị niile si akpa agwa otu ụzọ ahụ. Ọ baghị uru etu onye ọ bụla n’ime anyị siri malite, mgbe mgbanwe mere, enwere mmeghachi azụ mbu, mmeghachi omume nchekwa, na mmeghachi omume ahụ bụ na anaghị m atụkwasị obi na mgbanwe ahụ. Ekwenyesighi m na ọ ga-aka mma karịa ka esi mee ya ma echeghị m na m ga-enwe ike ịkwado ya ebe m kwesịrị itinye ya ka m wee nwee ike nwekwuo mmetụta. Akụkụ ahụ bụ akụkụ dị mkpa. Ọ bụ n'ezie echiche dị oke egwu. Agbanyeghị ọtụtụ mmadụ na-arapara na oge ahụ n'ihi na ha na-etinye uche n'ihe na-agaghị arụ ọrụ ma ọ bụ kedu ka ọ ga-esi bụrụ ihe ọjọọ? Ya mere, ha chọrọ ịkọ mkpịsị aka na oghere na teknụzụ na ọdịnihu na-agagharị na ọkwa ọzọ, nke bụ ihe m kpọrọ ihe ngwọta, ebe ị malitere ile anya, nke ọma, ọ bụrụ, yabụ ọ bụrụ na m na-etinye gị Jason na mgbanwe, kama ịbịakwute gị ma nwee obi ụtọ niile wee sị na anyị ga-agbanwe, anyị nwere CRM ọhụrụ a, ọ dị egwu.
Ọ ga - eme ka ihe niile dịrị gị mfe. Nzaghachi gi nke mbu gha agha inwe obi abua. Na-aga na-eche na m na-ere gị a dum nnukwu ibu ị maara ihe? Not gaghị atụkwasị m obi ma ọ bụ teknụzụ n'ihi na m na-achọ iresị gị ya. Ya mere, mgbe m na-ekwu maka ihe ọ pụtara, ọ bụ maka ijikọ ya na gịnị ka ọ pụtara nye Jason na ọrụ ya. Iji lee ya anya na oghere nke ọdịnihu na-akọrọ. Yabụ, kama, ọ bụrụ na m bịakwute gị wee sị, anyị na-enyocha ọtụtụ CRM, anyị ga-achọ ntinye gị na ha. Tell na-agwa anyị kedu ka ọ ga - esi mee mgbanwe na ọrụ gị kwa ụbọchị? Kedu ajụjụ ndị na-abịakwute gị mgbe ị hụrụ teknụzụ ndị a nwere na gịnị ka ị chere na-eme ka ọrụ gị na ndụ dị mfe ma ọ bụrụ na ị ga-eji nke ọ bụla n'ime mmemme CRM ndị a? Na NextMpping anyị na-ekwu maka ụdị PREDICT. Otu n'ime isi ihe dị mkpa iji mee ka mgbanwe a niile rụọ ọrụ bụ igwe mmadụ. Anaghị m ekwu maka naanị nyocha ndị ọrụ na-ahụkarị ma ọ bụ nyocha ndị ahịa, ana m ekwu maka otu mkparịta ụka bara uru na ndị mmadụ, ya na mmadụ, mmadụ na-asị mmadụ, kedụ ihe nke a pụtara gị? Kedu ka ị ga - esi hụ ya ka ọ na - arụ ọrụ yana kedu ka anyị ga - esi wee chepụta ụzọ iji bulie nke a ka ọ baara gị na onye ọ bụla uru n’ogo kachasị elu.
Jason: Cheryl, anyị kwesịrị na-enwe mkparịta ụka ụzọ mbụ na ọrụ m! Ugbu a ka ị na-ekwu nke a, a na m eche oge ndị ahụ niile m na-eti mkpọ iji mee nke ahụ na etu mguzogide ya, ole m ga-eji lụọ ọgụ a na-arị elu ka m na-achọ iweta ihe ọhụrụ ndị a, ngwaọrụ ndị a n'ihi Enwere m obi ụtọ banyere ya. Ma maa gịnị? A maara m dị ka onye ahịa na-eche n'uche Ndagwurugwu ma yabụ onye ọ bụla na-abịa ikuku nke inwe obi abụọ.
Yabụ m ga-achọ ịbawanye ntakịrị na ụdị amụma a iji nye anyị ohere ịka mma na iweta ihe ọhụụ na teknụzụ ọhụụ na ịbawanye uru na ebe ọrụ. Ọtụtụ n'ime ihe ndị a dị gburugburu AI, nke anyị ga-ekwu obere oge, mana nke mbụ, ka anyị kwatuo ụdị amụma a iji nyere anyị aka ma ọ bụ naanị nyere m aka n'oge a.
Cheryl: The ịkọ ụdị bụ ngwa ọrụ iji nyere aka ịkọ ọdịnihu na nke mbụ anyị na-achọ usoro, nke bụ P nke ụdị PREDICT. Ihe nlereanya ahụ nwere ihe asaa. Naanị m ga-ekwu maka ihe abụọ kpatara nke mbụ anyị nwere ike ime pọdkati elekere abụọ na ụdị PREDICT n'onwe ya. Anyị ga-ekwu maka P na R, P bụ maka ụkpụrụ.
R maka mmata. Ọ bụrụ na anyị onwe anyị dị ka ndị nwe azụmaahịa ma ọ bụ onye ọ bụla na-ege ntị dị ka onye ọ bụla, ọ bụrụ na ịchọrọ ijide ọdịnihu, ị ga-elele ụkpụrụ, ị ga-elele usoro site n'ọtụtụ echiche. Otu ọdịnihu nke nkà ọrụ anyị niile kwesịrị ịzụlite na ọkwa dị elu bụ ikike ịnwe ọtụtụ echiche.
Yabụ ị na-elele echiche ndị a niile anya ma ị na-elele usoro nke si n'echiche ndị ahụ niile. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị lelee ụlọ ọrụ na-ere ahịa nke ọma, o doro anya na anyị ga-achịkọta data ahụ site n'echiche ahịa ahụ, mana anyị ga-achọ usoro nke jikọtara arụmọrụ, nyocha, na ndị ahịa. Ma nke ahụ bụ ebe ọlaedo dị n'ihi na nke ahụ bụ ihe na-egosi anyị ọdịnihu n'ihi na ugbu a, anyị nwere ike ịga, Oh chere nke abụọ. Ya mere ire ahia na-ekwu na ndị mmadụ chọrọ imekwu ọrụ onwe ha. Ọrụ ndị dị n'ịntanetị na-ekwu na anyị enweghị teknụzụ iji nye ndị mmadụ ohere ijere onwe ha ozi ruo ogo ahịa na-ekwu na anyị kwesịrị ya na ịza ajụjụ na-ekwu nnukwu ego iji mee nke ahụ. Yabụ ihe ọ bụla echiche ndị ahụ bụ, anyị na-eweta ha niile ọnụ ma anyị na-achọta otu ihe site na njirimara ụkpụrụ. Ma nke ahụ jikọrọ ọnụ nwere ike ịbụ na anyị nwere ike ịchekwa ego maka ịza ajụjụ ma ọ bụrụ na anyị mejuputa nke a n'ụzọ ụfọdụ, anyị nwere ike ịnyere aka n'ịzụ ahịa na-arụ ọrụ ka mma n'ihi na ugbu a anyị amatalarị ihe onye ahịa chọrọ maka ijere onwe ya ozi. Anyị nwere ike ịnyere aka rụọ ọrụ ịhọrọ azịza teknụzụ ziri ezi enyere usoro ndị ahụ anyị amatala.
Jason: Achọrọ m ikwu banyere ndị ọzọ nke ndị a na ọnọdụ na anyị na-ahụ. Ka anyị bido n’ihu teknụzụ n’ihi na echere m na teknụzụ bụ ihe na-atọ ụtọ maka ndị mmadụ chọrọ iji aka ha. Yabụ kedu usoro ndị a? Ikwuru banyere imeghe emeghe. Anyị ekwuola ọtụtụ okwu ma doo anya na ịnọ n'ahịa, enwere m obi ụtọ mgbe ị na-ekwu maka sistemụ na CRM. Gịnị bụ nnukwu ihe ndị a anyị na-achọ ịhụ nke nwere ike ịmetụta anyị n'otu n'otu n'ebe ọrụ?
Cheryl: Obi dị m ụtọ na anyị malitere N'ajụjụ ọnụ ahụ na-ekwu banyere ndị mmadụ na mbụ n'ihi na NextMapping nke ahụ bụ igodo ebe a ka anyị kwesịrị ile anya, n'ụzọ doro anya, anyị niile nwere obi ụtọ banyere teknụzụ n'ihi na ọ na-emetụta ndụ anyị kwa ụbọchị. Anyị niile na-eji Siri na Alexa, anyị niile na-eji nkwalite olu, anyị niile na-eji teknụzụ emetụ aka. Anyị niile na-eji mmata ihu, yabụ na anyị nwere obi ụtọ, mana enwere m mmetụta nke ukwuu na anyị ga-eji teknụzụ ndị mmadụ na mbụ lee anya anyị. Anyị kwesịrị ibido n’ajụjụ dịka:
Kedu ka o si emetụta ahụmịhe ndị ahịa? Kedu ka ọ si emetụta ahụmịhe ndị ọrụ? Kedu ka o si enyere ụmụ mmadụ aka? Echere m na ọ bụrụ na anyị nwere ajụjụ ndị ahụ na mbu, mgbe ahụ anyị ga-adị mma na ngwa ọrụ teknụzụ niile anyị na-eche ihu. Ọ dị maka nbudata na weebụsaịtị anyị kpọrọ usoro 20 kachasị elu maka 2020
Anyị na-ahụ ọtụtụ ihe. Otu onye, ​​njikọta nke ise G ise G ga - aba ebe niile ma nke ahụ pụtara na ugbu a, anyị ga - enwe ọkwa dị elu nke ntinye olu, nke ihu ihu. N'ime teknụzụ ndị a niile anyị na-amalite amalite. Egwuregwu AI ga-aga n'ihu na-abawanye ma na-agbanwe ihe maka ọdịnihu ma mee ka eziokwu ahụ pụta ìhè na ọdịnihu ga-esokwa. AI ga-aga n'ihu ịgbanwee otu anyị si azụ ahịa, yabụ na ọ gaghị ewe ọrụ. Ọ ga-arụ ọrụ ndị mmadụ na-arụ ugboro ugboro. Ya mere, mgbe anyị lere anya na omume AI, usoro ndị ọzọ anyị na-ahụ bụ akpaaka, ụlọ ọrụ robotics dị arọ n'ichepụta ihe, ọtụtụ cobots, ndị na-elekọta ndị na-elekọta ụlọ ọrụ ahụike, karịa exoskeletons iji nyere ụmụ mmadụ aka ebuli ihe na 10 ugboro ike nke nwoke. Enwere ọtụtụ ihe ọhụrụ. N'ezie, enwere m obi ụtọ banyere ya, anyị na-anọ n'akụkụ oke nke ọtụtụ ọrịa ndị mmadụ na-arịa ugbu a na-edozi n'ime afọ ole na ole sochirinụ site na teknụzụ. Anyị nọ na nsọtụ nke idozi ihe dịka ọrịa ọgụgụ isi site na ọgwụgwọ VR. Ezigbo usoro ọgwụgwọ bụ oge dị egwu iji dịrị ndụ ma yabụ teknụzụ ndị a ga-agbanwe ụwa.
Anyị nwere ijeri mmadụ asatọ na mbara ala. Ọkara n'ime ha jikọtara na WIFI. Ugbu a n'ime afọ atọ sochirinụ, 8% nke ụwa ga-enwe njikọta na WIFI. Yabụ ọ bụrụ n ’ị chere na anyị enweela ihe ọhụrụ, ugbu a ọ ga - abawanye site na pasentị 75 nke ndị bi. Ugbu a na-agbakwunye na isi mmalite, na-agbakwunye na ọdụ data, na-agbakwunye na amamihe nke anyị na-achịkọta site na teknụzụ. I nwere ike inwe echiche abụọ banyere ọdịnihu.
Onu ogugu nke mbu bu itu ujo. Ma ọ bụ ọnụọgụ abụọ, ị na-enwe ọ excitedụ ma sie ike nke ukwuu ma ị lelee ohere nke otu anyị nwere ike isi gbanwee ụwa. Anaghị m ekwu nke ahụ site n'echiche dị mma. Asim na o bu ezigbo nnoo ka anyi kee uwa. Ha na-edozi nsogbu ịma aka gburugburu ebe obibi. Know mara, anyị nwere Greta Thunberg na-ekwu maka gburugburu ebe obibi. Enwere ngwọta. Enwere ngwaahịa ugbu a nke emepụtara na site na otu mmiri mmiri, enwere ike ibute plastik ruo 10th nke nke mbụ ya. Enwere ọtụtụ ihe ọhụrụ na anyị na-anụ ihe niile na-adịghị mma na mgbasa ozi. Anyị anaghị anụ maka ihe ọhụụ ga-eme ọtụtụ nsogbu anyị ugbu a, ihe gara aga yana ya mere ọ bụ oge na-atọ ụtọ ịdị ndụ.
Jason: Cheryl, a hụrụ m gị n'anya na inwere ike ịkekọrịta otu echiche nke ihe na-abịa. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ma na m hụrụ n'anya na ị dị mma banyere ya, achọrọ m ka ndị mmadụ nwee ahụ iru ala ịmara na ọdịnihu a na-abịa na gịnị ka ọ pụtara maka ha na ọrụ ha n'ihi na enwere echiche a dị ka m pụtara, dị ka, wow, mgbanwe a niile na-eme. Kedu akụkụ m na-arụ? Kedu ka m ga-esi dị mkpa na oke osimiri a nke mgbanwe? Dị ka ọbụlagodi na nke m, a na m na - alụ ọgụ maka ihe ndị dị mfe dịka ịhe ọhụụ na teknụzụ akpaaka dị mfe, mana ihe ị ka kwuchara bụ ụzọ karịrị ihe ọtụtụ mmadụ nwere ike isi mee ka uche ha dịrị. Yabụ kedu ka anyị ga-esi banye n'ọtụtụ a ma kedu ka anyị ga-esi mee akụkụ anyị?
Cheryl: Nke a bụ ebe okwukwe m na ụmụ mmadụ dị elu. Enwere m okwukwe dị elu na anyị ga-edozi ọtụtụ nsogbu. Dịka m kwuru na mbụ, enwere m ọtụtụ ajụjụ m jụọ ya na akwụkwọ ọrụ "NextMapping" gburugburu, ị nwere uche na-atụ ụjọ ka ị nwere ọtụtụ uche banyere ọdịnihu? Mana echere m na site na nnoo, gini bu uzo ozo, o na ele anya ebe ino ugbua. Yabụ ọ bụrụ na ụjọ na-atụ gị maka teknụzụ dịka ọmụmaatụ, maọbụ na ị na-atụ ụjọ maka ntụzịaka nke ọha mmadụ na-aga, echere m na ọ bụ ohere dị adị maka anyị ka anyị si na ya pụta. Ekwenyere m na anyị nwere ohere evolushọn ebe a yabụ mgbe ị na-ele mgbanwe anya, ị nwere ike ile ya anya dịka m na-atụ ụjọ, amaghị m ihe ọ pụtara. Ma ọ bụ ị nwere ike ile anya dị ka ihe na-atọ ụtọ nakwa na ọdịnihu bụ akọrọ.
Ọ dị mma ịga ebe ahụ. Nke ahụ bụ nke mbụ ime mgbanwe bụ mmata nke m na-atụ ụjọ na amaghị m ihe ọ pụtara, mana nzọụkwụ nke abụọ bụ ịnakwere nke ahụ wee sị, kedu ihe m ga - eme ka m wee gbanwee obi m? Iji maa atụ, ọ bụrụ na ọha mmadụ na-aga n'ihu na ọha mmadụ nke onye kwuo uche ya niile anyị nwere ohere ịsị: gịnị kpatara ya?
Enwere m ike ijide ọnọdụ ike? Ego m ọ na-amata m ma kwenye na ọ bụrụhaala na m jide ike, m na-emeri?
A na-ekerịta ọdịnihu, ọdịnihu bụ mmekọrịta, ọdịnihu bụ mkpokọta. Naanị otu ụzọ iji dị njikere maka ọdịnihu bụ ile anya na mgbanwe dị ka ihe mgbaama maka anyị ka anyị wepụta. Ma enwere ọtụtụ omimi karịa ebe ị maara na MindValley kpatara nke ahụ bụ ihe ị bụ maka. Enwere omimi miri emi n’ebe ahụ n’oge ọbụla mgbanwe mere ma ọ bụ oge ọbụla ọgbaghara mere, ọ bụ oku maka anyị, ohere anyị ga-aga, kedu ka m ga-esi lee ihe okike a anya?
Kedụ ka m ga - esi mezue uche m ka m ghara ịlaghachi azụ na mgbanwe a, mana m na - ahụta mgbanwe na mgbanwe ahụ?
Ọzọkwa, na-ezo aka na akụ m, ị mara, "Art of Change Leadership" M na-ekwu maka nke ahụ. Kedu ka anyị ga - esi mee mgbanwe ndị ahụ na ihe na - esote?
Na NextMapping anyị na-ewetara ụdị ahụ iji nyere ndị mmadụ aka ime mgbanwe ndị ahụ.
Jason: Ọ bụ ihe m chere na anyị niile na-achọ, mana o doro anya na anyị na-eche ihu ọgụ ọnwụ nke agha anyị ga-agabiga na m hụrụ n'anya etu ọtụtụ ọrụ na ihe ndị ị na-ekwu maka teknụzụ siri dị ma dị ka ị kwuru, ọ bụ n'ezie omume mmadụ anyị iji dozie ya na achọrọ m ịhụ ma anyị nwere ọtụtụ ngwaọrụ anyị nwere ike inye maka onye ọ bụla na-ege ntị, onye nọ n'ọkwá onye ndu ma nwee ike ịmekọrịta ndị mmadụ n'ime otu ha nwere n'ezie ndị a. ụdị uche dị iche iche na-adịghị mma na otu ị ga - esi mee ka ha dịrị nkwadobe nke ọma maka mgbanwe n’ebe ọrụ. Karịsịa ma ọ bụrụ na a bịa n'ihe ndị nwedịrị ike iweta mkpa ọ dị inwe ọnọdụ pụrụ iche n'ebe ọrụ dị ka nke ahụ. Ọ dị ka ihe siri ike ịnyagharịa. Kedu ihe ị hụrụ ma ọ bụ gịnị ka ị na-atụ anya ya?
Cheryl: Arụrụ m ọrụ na otu ahụike na US, ha na-aga nwezigharị ihe dị ukwuu. Yabụ na ụlọ ọrụ ọzọ zụtara ha, nke pụtara ihe dị ka ndị isi iri n'ọnụ ụlọ iri atọ nke m na-emezi ka ọ ga-aba. Enweghị ọrụ dịịrị ha. Enweghị ụzọ ọ bụla akọwapụtara nke ọdịnihu ma ọ bụ ụzọ ọrụ ma ọ bụ atụmatụ inwe nke ha.
Ugbu a, maka onye ọ bụla na-ege ntị, ozi ọma ahụ bụ taa, onye ọ bụla nke mere enweghị ọrụ nwere ohere n'ihi na a ga-enwe ụkọ ọrụ nke nde mmadụ 85 na North America ruo mgbe afọ 2030 bụrụhaala na ị dị gara gara nwee ike imeghari, ị ga-enwe ohere ọrụ. Nke ahụ bụ eziokwu ugbu a. N'oge ahụ, afọ 15 gara aga abụghị otu.
Ihe anyị mere bụ na m gbara mbọ ka gị na ndị isi iri atọ ahụ nwee mkparịta ụka gburugburu tebụl wee sị, “Nke a bụ eziokwu. Nke a bụ eziokwu. Anyị nọ n'ọnọdụ nhazigharị dị mkpa. Ndi mmadu iri no n’ime ulo a agagh adi n’onodu ha ma obu n’oru ha. Anyị amaghị ihe nke ahụ yiri na anyị amaghị ebe nke ahụ na-aga, mana nke a bụ ihe anyị maara bụ na ọ ga-eme maka ịba uru nke nzukọ ahụ iji nọgide na-adị, yabụ eziokwu na-enweta mmeri mgbe niile. ihe anyị ga-enyere gị. Anyị ga-enye gị ụdị, ngwa ọrụ, nkuzi, nkwado, akụrụngwa na ọ bụrụ na ọ bụ gị nọrọ, ị nwere ngwaọrụ iji nweta akụ na ọdịnihu, ụzọ ahụ siri ike n'ihu na-arụ ọrụ ihe omuma ohuru ohuru a. Maka ndị gị nke anyị na-ahapụ, chee maka ya dịka ohere. Package ga-ewere ngwugwu ga-apụ. You'll ga-enwe ike idegharị ndụ gị. Ga-enwe ike ịmeghachi ndụ gị. I nwedịrị ike ịnweta ohere ịlaghachi na nkwekọrịta. Ka anyị lelee ka onye ọ bụla n'ime gị n'otu n'otu, otu anyị nwere ike isi kwadebe gị, nyere gị aka, nyere gị aka, ma kwado gị iji mepụta ọdịnihu gị kachasị mma. “
Ugbu a, enwere m obi ụtọ ịgwa gị na site na ime nke ahụ, mmadụ iri na-enweta ndị isi ha na-enyere ha aka ịchọta ohere ọzọ ha. Ndị isi ahụ na-azụ ha, na-akwado ha, na-eduzi ha, na ndị mmadụ 10 ahụ biputere ihe kwuru ihe kachasị mma dakwasịrị m. M mụtara otú ịnyagharịa mgbanwe. Amụtara m otu esi emeso ọdịnihu na-ejighị n'aka na ebe m kwụsịrị, enwere m obi ụtọ karịa ka m nwere tupu agbanyeghị, yabụ achọghị m ịme ihe mgbu nke mgbanwe.
Maka ndị isi na-ege ntị, ị ga-adịrịrị njikere ịnọdụ ala na ndị mmadụ oge niile wee hụ ha dị ka mmadụ, anya na anya, gee ntị na ihe ha na-atụ ụjọ. Zere mgbu. Etinyela ha aka na nzachapu nsogbu. Nyere ha aka inweta site na ụdị.
Nyere ndị mmadụ aka ịgbanwe. Anyị na-eji usoro iduzi mgbanwe anyị wee kwuo, ebe ị chere na ị nọ na mgbanwe ugbu a? Kedụ ka anyị si mee ka ị kee ihe ngwọta?
Nwere ike ọ bụghị naanị ịgwa ndị mmadụ na ị na-adịghị mma na ị kwesịrị ịgbanwe. You nwere ike ọ bụghị naanị ịgwa ndị mmadụ, inu ya, buttercup. Anyị na-agagharị ma anyị na-agbanwe agbanwe na agbanyeghị. Nweghị ike ịgwa ndị mmadụ ka ha gbanwee ma ọ bụ nwụọ. You ga-echebara ihe ịga nke ọma ndị mmadụ anya na dịka onye ndu ị ga-adị njikere ịgbanye aka uwe gị wee gbadata na unyi ma nwee mkparịta ụka ndị ahụ siri ike, dị oke mkpa dị ka enwere ike inye gị ihe ọmụma na enyere gị kesaa ma duru ndị mmadụ gaa ebe ọ ga-abara ha uru, nyere ha aka ka ha hụ otu esi enyere ha aka ma ị ga - emeri. Nyere ha aka ihu n’ọdịnihu.
Jason: Enwere m olileanya na ndị isi niile na-ege ntị na nke a were nke ahụ. Been nweela ike ịnara ọtụtụ ihe a ga-eme iji mee ka nke a dị nro dịka o kwere mee na enwere m obi ụtọ na ntọala ahụ dum bụ eziokwu. . Echere m na eziokwu bụ n'ezie ihe ọ dị mkpa ịpụta ka i wee nwee mkparịta ụka ndị a n'eziokwu na m ga-agbatị nke a na ka m na-ege ntị na nke a, ọ dị m ka nke a ọ bụ ihe ịchọrọ ka ị tinye n'ọrụ mgbe ọ bịara nduzi onwe gị, dị ka otu esi akwụwa aka ọtọ na onwe gị. You nwere ike ịgwa anyị ntakịrị ihe banyere nke ahụ? On otú ikekwe m na a ọrụ na m nwere ike ịhụ na-emekarị nke ebe redundancy nke m ọrụ, m na nkà na nke m nka na-abịa? Kedu ka m ga-esi nwee nduzi onwe m, ime ihe n'eziokwu nke onwe m iji hụ ebe m nwere ike iweghachite ma enwere ike ịkọwapụta nka m ga-achọ n'ịzụkwu ọzụzụ?
Cheryl: Iduzi onwe gị nke ọma, na-egbochi ego gị. Ọ bụrụ na m maara na m ga-eme n'ọdịnihu ọrụ bụ ejighi oru, ihe mbụ m ga-eme bụ mmeghachi omume dị ka Maslow si hierarchy na nke ahụ bụ na-agbalị ichebe onwe m.
Ọ bụ ya mere anyị ji hụ ọtụtụ CYA na nzukọ ma anyị hụ ọtụtụ CYA na-ekpuchi gị **. Ihe mere anyị ji hụ nke a bụ na ndị mmadụ na-aga na nzaghachi ụjọ.
Dị ka, Achọghị m ịnabata mgbanwe a n'ihi na ọ pụtara na m nwere ike enweghị ọrụ. Ihe m kwuru dị ka onye nchịkwa bụ, ya mere, ka anyị gaa ebe ahụ. Ọ́ bụrụkwanụ na, olee nkà i nwere? Olee uru ị na-eweta? Kedu ka ị si agbanwe ndụ ndị mmadụ? Kedu ka ị si etinye uru na nzukọ ahụ? Maka na ọ bụrụ na ejiri eriri nkịtị tinye uru na ị na-achọkarị inyere ndị ọzọ aka ka ha nwee ọganiihu, ị kwadola nkwụsi ike ọrụ n'ọdịnihu, enweghị ajụjụ.
Idu onwe onye n’egosiputa onwe onye. Ikwenyere na ị bara uru?
Ikwenyere na ị tosiri ike ịmepụta uru maka onye ọ bụla n'ọdịnihu?
Ikwenyere na a na-ekerịta ọdịnihu?
Ma ọ bụrụ na ị nwere ùgwù onwe onye ahụ, n'ụzọ, ndị otu gị ga-ahụ gị n'anya karịa ka ha hụburu n'ihi na ha hụrụ na ị naghị achọ ichebe onwe gị. You're na-elekwasị anya na ha na ihe ịga nke ọma ha karịa ka ị na-echedo ọdịnihu gị ma ọ bụrụ na ị gbanwee echiche ahụ na nke ahụ, ọ bụ ihe na-erughị, Oh my gosh, a ga m ahapụ ọrụ na ihe gbasara ihe ị ga-eme Amaara m na m bụ eziokwu gbasara ihe m na-eme iji tinye uru. Na nke ahụ nye m, maka onye ọ bụla na-ege ntị na-anabata echiche ahụ n'ezie na ọkwa ya ọzọ, ị ga-ahụ na onweghị ihe ị ga-atụ egwu.
On a onye ndetu, M na na na entrepreneur ihe karịrị 20 gbakwunyere afọ. Izu ụka adịghị kwa izu. Amaghị m ebe onye ahịa ọzọ ga-esi. Amaghị m ebe ego ọzọ na-abịa. Nke a bụ eziokwu m maka afọ 20 gbakwunyere na afọ. Ekwenyere m na onye ọ bụla kwesịrị ịzụlite echiche azụmaahịa karịa echiche a nke anyị nwerela n'ime iri afọ ole na ole gara aga nke ụgwọ akwụ ụgwọ, nke bụ aka ọla edo.
Ọ bụ n'ezie. Ọ na - egbochi anyị iche echiche karịa ihe anyị ga - eme ma ọtụtụ mmadụ etinyegoro aka ikwere na ọ bụ naanị njirimara ọrụ ha nọ na ya na ọ dị mkpa ịgbanwe. Itymara kwesịrị ịgbanwe na, anyị karịrị na. Anyị na-eweta uru karịa nke ahụ ma ọ bụrụ na ị kwenyeghị na nke ahụ, mgbe ahụ ọrụ anyị ga-arụ na onwe anyị bụ gburugburu na-emepe nke ahụ na ọkwa ya kachasị elu.
Jason: Kwuru. Na-ekwusara òtù ukwe okwu ahụ wee dakwasị ụlọ. Anyị na-emechi ihe omume a, na-ekwu maka nke a na ikekwe otu ihe m chọrọ ikpuchi tupu anyị belata nke a bụ ka m na-agagharị ụbọchị m na-arụ ọrụ ụbọchị, kedu ka m ga-esi nọrọ n'elu ịhụ ọnọdụ ndị na-emetụta m kasị ọsọ? Dị ka olee otu m ga-esi nọrọ na radar iji mata ihe m kwesịrị ịchọ maka ọzọ?
Cheryl: Na NextMapping anyị niile bụ ihe - “Gịnị bụ ọzọ?” Ajuju ajuju karie karia n'ihi na anyi adighi eme ka obi ghara iru anyi ala. Yabụ ihe m ga - agwa gị bụ ịgagharị ọnọdụ ndị ahụ, ọ bụ n'ezie maka itinye uche n'ihe na - emetụta gị onwe gị n'ọdịniihu gị yana agụụ gị yana agụụ gị na ihe ịchọrọ ime na inye aka. Ma lelee ya anya. Know maara na nke a bụ ọrụ anyị. Yabụ maka m, a na m egekarị m ntị n'ọdịnihu. Gịnị ka ha na-ekwu? Kedu ihe ha na-eme? Ana m ege ntị na teknụzụ. Kedu ihe na-ewu ewu na teknụzụ na kedu ka ọ si emetụta ọha mmadụ?
Yabụ, echere m na ịnwe okpu ọdịnihu ahụ mgbe ị nọ n'ọrụ gị ugbu a bụ otu ihe ị nwere ike ịmalite ịmalite hone ugbu a karịa ịtụ egwu. Otutu ndi mmadu nwere isi ha na aja. Ha achọghị ịmata ka ihe si agbanwe ma ọ bụ ihe na-eme. Ana m asị, emela ihe ahụ. Welite isi gị elu. Lezienụ anya, n'ihi na ọ bụ ebe ahụ ka ohere ndị ahụ ga-eweta.
Ma n'ụzọ, nke a bụ ebe onye guzobere Uber na onye guzobere Airbnb, ha weliri isi ha elu ma hụ na a na-ekerịta ọdịnihu wee sị, ebe a ka ọha mmadụ na-aga. Ndị mmadụ chọrọ ụgbọ ala na-achọ. Ha chọrọ ịhụ onye ga-anya ha. Ha chọrọ inwe ike ịga ụwa ma jiri ebe obibi mmadụ. Yabụ ọ bụrụ na anyị eweli isi anyị n’elu ájá, anyị na-ahụ ohere. Onweghi ihe ị ga-atụ egwu. Naanị ihe anyị kwesịrị ịtụ ụjọ bụ ka anyị bibie onwe anyị.
Anyị na-etinye mgbochi nke onwe anyị - mgbochi nke anyị na m, nke ahụ bụ ihe m ga-achọ ịtụ egwu bụ ebe m na-akwụsị onwe m? Ebee ka m na-emechi ikike m? Ebee ka m na-akwụsị ohere? N'ihi na ọ bụrụ na anaghị m ele anya n'ọdịnihu, ọ pụtara na m na-achọ ibi na afụ. M bi na agugo. M na-ebi na-eze na m na na na osimiri agugo otutu oge. Jason, ọ bụghị ihe ọchị. Na-egbusi oge dị ukwuu na agọnarị. Ajuju kacha m nma nye onwe m bu: “Olee otu m g’esi buru nwunye kacha mma, nne oma, nne oma, ezi enyi, na ndi kachasiri nma n’enye ndi ahia m?” Achọrọ m ịnọ naanị, nke a na-agba m anya mmiri. Achọrọ m ịbụ mmadụ kachasị mma m nwere ike ịnwe ma ọ bụrụhaala na nke ahụ bụ ihe mgbaru ọsọ m, enweghị m atụ egwu ọdịnihu. Egwu na-atụ ụjọ.
Jason: Cheryl, daalụ nke ukwuu maka itinye oge a na anyị ma soro anyị kerịta nghọta ndị a niile. Echere m na onye ọ bụla ga-ahapụ ebe a nwere echiche dịgasị iche iche banyere otu esi edozi ọdịnihu a nke na-abịakwute anyị ngwa ngwa na ngwa ngwa.